Marijuana နှင့် CBD စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ထိပ်ဆုံးအမှား ၁၀ ခုဖြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်
ထိပ်တန်းအမှား ၁၀ ခုနှင့်အပန်းဖြေဆေးခြောက်ဆေးခန်းများသည်၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပြုလုပ်သောအမှားများဖြစ်သည်။
အမှား ၁၀ ခုနှင့်အပန်းဖြေဆေးခြောက်
အင်တာနက်ရှာဖွေသူအားလုံး၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကိုမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များမှပြုလုပ်သည်။ ဤအချက်သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးသဖြင့် ပို၍ မှန်ကန်သည်၊ အကြောင်းမှာဤအလားအလာရှိသောဖောက်သည်များသည်များသောအားဖြင့်ရွေ့လျားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းရှာဖွေမှုများသည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် desktop ရှာဖွေမှုကိုကျော်လွန်သွားသည်ကိုသတိပြုမိသောအခါဂူးဂဲလ်ကဤပြောင်းလဲမှုကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။ Google ကတကယ်တော့လုပ်လိမ့်မယ် ပြစ်ဒဏ် သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာဟာလက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့မရင်းနှီးဘူးဆိုရင်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုယခုပင်လျှင်ဂူဂဲလ်၏မိုဘိုင်းဖော်ရွေသော link ဖြင့်စမ်းသပ်နိုင်သည်။ https://search.google.com/test/mobile-friendly
ထုတ်ကုန်မီနူးမရှိသောသူတို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်။
Lerely သို့မဟုတ် Weed-Maps စသည့်တတိယပါတီဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အပန်းဖြေအနားယူသည့်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းအများစုရှိသည်။ ၎င်းသည်အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကြီးမားသောအမှားဖြစ်သည်။
A. ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အကြောင်းအရာများကိုမကြာခဏမွမ်းမံသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုနှစ်သက်သည်။ site တစ်ခုမကြာခဏ update လုပ်လေ၊ goaw crawlers က site ကို index လုပ်လိမ့်မည်။
C. သင်၏ တုံမှုနှုန်း အရမ်းမြင့်လိမ့်မယ် bounce rate ဆိုသည်မှာ SEO ဟူသောဝေါဟာရဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်မျှကြာသည်ကိုတိုင်းတာသည်။ အကယ်၍ သင်ဂူဂဲလ်ဆေးခြောက်ကိုအသုံးပြုပြီးကားအစိတ်အပိုင်းများကိုရောင်းချသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ပါကသင်ချက်ချင်းပြန် နှိပ်၍ သင်၏ရှာဖွေမှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဂူဂဲလ်ကဒီမက်ထရစ်ကိုသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်က spammy (သို့) အရည်အသွေးနိမ့်တဲ့လက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ သူတို့လိုချင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရှာသောသူတို့သည် site ပေါ်တွင်ကြာကြာနေပြီးသတင်းကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်။
D. အကယ်၍ သင်၏မီနူးသည်သင်၏ site ပေါ်တွင်မရှိပါကတိကျသောထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေနေသောဖောက်သည်များသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များထံသို့သွားလိမ့်မည်။ ဒီမှာဥပမာတစ်ခု
အသုံးပြုသူရှာဖွေသူများ Tacoma အတွက်အပြာရောင်အိပ်မက် ဒီမှာရလဒ်တွေရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာသူတို့မှာမီနူးမရှိတဲ့ဆေးခြောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပါလိမ့်မယ် ဘယ်တော့မှ ဤအဒေသခံဒေသခံရှာဖွေသူများအပေါ်ပေါ်လာပါ။
အကယ်၍ သင်သည်လူအများရှာဖွေသောသော့ချက်စာလုံးများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အချို့သောကိရိယာများကိုအသုံးပြုသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သောသော့ချက်စာလုံးသုတေသနကိုမပြုလုပ်ပါကသင်၏ပြိုင်ဘက်များထက်အသွားအလာနှင့်ရောင်းအားနည်းသွားလိမ့်မည်။ အခြေခံကျသောသော့ချက်စာလုံးသုတေသနလုပ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမှာဂူဂဲလ်တွင်သင်၏ပစ်မှတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။ The အလိုအလျောက်ပြည့်စုံ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစားသုံးသူများအသုံးပြုသောစကားလုံးများအတွက်အကြံပြုချက်များသည်ကောင်းမွန်သောသဲလွန်စဖြစ်သည်။ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၌ဤသော့ချက်စာလုံးများမပါလျှင်၊ Meta ဖော်ပြချက်နှင့်သင့်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ၏ကိုယ်ထည်တွင်သင်သုံးစွဲသူများစွာအတွက်ပျောက်ဆုံးနေသည်။
အေ။ သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုအကြောင်းအရာထည့်သွင်းတယ်။ သင်ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပုံပြင်များ၊ အဖြစ်အပျက်များနှင့်အခြားအရာများထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ခ။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုအဆင့်မြင့်သောအဆင့်များဖြင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာများဖြင့်မွမ်းမံထားသည်။
C. ရှာဖွေမှုအားလုံး၏ ၇၅ ရာနှုန်းဖြစ်သောအမြီးရှည်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုသင်ဖမ်းယူလိမ့်မည်။ အမြီးတိုသော့ချက်စာလုံးသည်ကျွန်ုပ်အနီးရှိဆေးခန်းများကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အမြီးရှည်သောသော့ချက်စာလုံးသည်“ ဆီယက်တဲလ်ရှိအပန်းဖြေဆေးခြောက်အကောင်းဆုံးဆေးခန်းဖြစ်သည်။ တစ်နေ့လျှင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းသောရှာဖွေမှုများသည်ဂူဂဲလ်တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးသောအရာများဖြစ်သည်ကိုလည်းသတိရပါ။ ဘလော့ဂ်တစ်ခုထည့်ခြင်းနှင့်၎င်းကိုကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများဖြင့်မွမ်းမံခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤဖောက်သည်များကိုပိုမိုဖမ်းယူလိမ့်မည်။
အရေးကြီးသော X ဆေးခန်းအတွင်းပိုင်း / ပြင်ပ WIFI ကင်မရာ
199.99 ရောင်းရန်အပေါ် 119.00
သင်၏ဂူဂဲလ်စီးပွားရေးစာရင်းနှင့်ဂူဂဲလ် + ပလပ်စ်စာမျက်နှာကိုအလိုမလိုက်ခြင်း။
Google သည် FaceBook, Yelp ကဲ့သို့သောလူမှုရေးနှင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုဒ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ သင်၏ဂူဂဲလ်စီးပွားရေးစာရင်းကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုထည့်ခြင်းအားဖြင့်ဂူဂဲလ်သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုအလေးအနက်ထားပြီးပိုမိုမြင့်မားသောစာရင်းပြုစုရန်အလားအလာပိုများသည် သင်၏ဂူဂဲလ် + စာမျက်နှာများကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့်သင့်ဖောက်သည်များအားသင်၏စာမျက်နှာကိုလိုက်ရန်အားပေးခြင်းဖြင့်လည်း။ သင်၏ပို့စ်သည်သူတို့၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုချက်ချင်းဖော်ပြလိမ့်မည်။
Google သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ပြီးလူအများစုမသိသည့်အချက်မှာ You-Tube သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်သည်။ အဘယ်အရာကိုခန့်မှန်း? Google သည် You-Tube ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများမြင်သည့်အခါတိုင်းသူတို့သည်ကြော်ငြာကိုရောင်းနိုင်သောကြောင့်ဂူဂဲလ်သည် You-Tube ဗီဒီယိုများကိုနှစ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးအတွက် You-tube Channel ရှိရန်နှင့်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောသော့ချက်စာလုံးများကြွယ်ဝသောဗွီဒီယိုများပုံမှန်တင်ရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။
ပထမ နေ့မှစ၍ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဖောက်သည်များကသင်၏စာပို့စာရင်းသို့ဝင်ရောက်ရန်သူတို့၏အမည်နှင့်အီးမေးလိပ်စာကိုချန်ထားနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဒေါ်လာစျေးရှိသည့်ငွေပမာဏအတွက်ဖြစ်ရပ်များ၊ အထူးလျှော့စျေးနှင့်ပြိုင်ပွဲများကိုကြေငြာရန်ဤစာပို့စာရင်းကိုသုံးနိုင်သည်။
၀ ဘ်ဆိုဒ်၏အားသာချက်ကို Google ဆုံးဖြတ်သည့်အရေးအကြီးဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာအခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များကသင့်အားဆက်သွယ်မှုများကိုပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကတစ်ခုအဖြစ်ရေတွက် အင်တာနက်မဲ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်စစ်မှန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအကြောင်းအရာကောင်းများရှိသည်။ သို့သော်လင့်ခ်အားလုံးသည်မတူညီပါ။ သင်၌ရှိသည့်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တစ်ခုတည်းရှိဝက်ဘ်ဆိုက်များမှလင့်ခ်များကိုသင်လိုချင်သည်။ သင်၏ရောင်းချသူမည်မျှတွင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များရှိသနည်း။ သူတို့အားလုံးထို site မှသင့်ရဲ့ link ကိုညွှန်ပြပါ။ ဒါကကူညီလိမ့်မယ် နှစ်ခုလုံး သင်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ရောင်းအားမြင့်မားလာသည်။
သင်၏ ၀ န်ထမ်းမည်မျှတွင် Face-book၊ twitter သို့မဟုတ် Google အကောင့်များရှိပါသလဲ။ သူတို့သည်သင်၏ blog post ကိုတင်ပြီးမျှဝေနေသလား။ သူတို့သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ချက်များကိုချန်ထားခဲ့ပါသလား။ သူတို့သည်သင်၏လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကြိုက်အကြောင်းအရာများနှင့်ရေးသားချက်များကိုဖန်တီးနေသလား။ သူတို့မဟုတ်လျှင်သူတို့ဖြစ်သင့်သည်။ လူမှုရေးဝေစုများများများများလုပ်လေသင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်အဆင့်မြင့်လေလေ။ သူတို့၏အောင်မြင်မှုသည်သင်၏အောင်မြင်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပါ ၀ န်ထမ်းများကသင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်နိုင်ရန်နည်းလမ်း ၈ ခု။
ကစစ်တမ်းတစ်ခုအရသိရသည် Brightlocal သုံးစွဲသူများ၏ ၈၈% သည်အွန်လိုင်းသုံးသပ်ချက်များကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံချက်ကဲ့သို့ပင်ယုံကြည်ကြသည် - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများသည်သူတို့မသိသောလူများကတင်ပြသောအချက်ကိုသင်အံ့သြမိသည်။ Brightlocal မှတူညီသောစစ်တမ်း၊ လူ ဦး ရေ၏ ၁၂% သာစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပုံမှန်မဖတ်ရှုကြောင်းဆုံးဖြတ်သည်။ စီးပွားရေးပိုင်ရှင်အများစုသည်၎င်းတို့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်သည်ကိုပင်မသိကြပါ။ သင်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုပါက၎င်းသည်သင်၏အားသာချက်ဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပို၍ ဆိုးဝါးသောပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကိုဂူဂဲလ်ကတိုက်တွန်းသည်။ သင်၏အွန်လိုင်းဂုဏ်သတင်းကိုဂရုစိုက်ကြောင်းဂူးဂဲလ်နှင့်ဝယ်သူကိုပြသသည်။ ဂူဂဲလ်သည်၎င်းကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်တရားဝင်ပြီးသင့်ကိုပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည့်အချက်ပြအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
Dispensary Search Engine optimization သည်သင်သုံးစွဲသူများပိုမိုရရှိစေရန်သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရေးကြီးဆုံးအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးသည်ဂူဂဲလ်၏ပထမစာမျက်နှာတွင်မရှိပါကထိုဖောက်သည်များသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များသို့သွားနေကြသည်။
Isenselogic.com David Meshach သည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ဒေတာဘေ့စ်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆေးခြောက်ဆေးခန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ အပန်းဖြေမှုနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆေးခြောက်စျေးကွက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်အမှားအယွင်းကင်းကင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုခုန်ချလိမ့်မည်။
တစ် ဦး အဘို့အယနေ့ငါတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ အခမဲ့ SEO စစ်ဆေးမှု သင်၏လက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်သင် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းနိုင်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဆက်သွယ်ရန် Form ကိုဖြည့်ရန်
အမျိုးအစား: ဘ‌‌လော့ခ်By မင်္ဂလာပါ ဇူလိုင်လ 3, 20173မှတ်ချက်
Tags: Dispensary Search Engine Optimizationဆေးခြောက် SEO
လွန်ခဲ့သောPrevious post:Leafly & Weedmaps သည် 2019 တွင်ကြော်ငြာရန်မည်မျှကျသင့်သနည်း။နောက်တစ်ခုNext post:SEO မှတစ်ဆင့် ၀ င်ငွေပိုမိုရရှိရန်သင်၏ ၀ န်ထမ်းများကသင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားကူညီရန်နည်းလမ်း ၈ ခု
seo တိုင်ပင် says:
ဇူလိုင်လ 1, 2020 မှာ 9: 06 ညနေ
ငါသည်ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်ကိုခံစား! ငါသည်သင်တို့၏ဘလော့ဂ် site ကိုမျှမျှတတပြန်လည်သုံးသပ်
ဇူလိုင်လ 2, 2020 မှာ 2: 26 ညနေ
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုကောင်းအောင် သုံး၍ အပန်းဖြေဆေးခြောက်ဆေးခန်းများအသုံးပြုခြင်းမှရရှိသောနည်းလမ်း
ရက်ပေါင်း ၃၀ သာကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မက်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှစ်ရန်လိုသည်။
ကလစ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့်ကျန်တစ်သက်တာအတွက်နေ့စဉ်ဒေါ်လာ ၁၅၀၀၀ ရနိုင်သည်
မွကွေီးနှစျသိမျ့ CBD says:
သြဂုတ်လ 8, 2020 မှာ 12: 11 နံနက်
ဂရိတ်ဆောင်းပါးဆေးခန်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းနှင့် SEO ဖြစ်သည်။
Name ကို * အီးေမးလ္ Website